व्यावसायिक कृषिका लागि यान्त्रिकीकरण
पुस २२, विराटनगर । परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई विस्थापित गरी व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख गराउनका लागि विराटनगर महानगरपालिकाले कृषि यान्त्रिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यसका लागि महानगरपालिकाले किसानलाई रू. १० लाख सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । यो सहयोगमा कृषकले रू. १० लाख थपेर कृषि औजार रिपर खरीद गर्ने योजना बनाएको महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीका प्रेस सल्लाहकार कौशल निरौलाले जानकारी दिए ।
विराटनगर–१९ मा रहेको खापटोलमा स्थानीय कृषकको समूहले २२ बिघा क्षेत्रफलमा गहुँ खेती गरेका छन् । महानगरपालिकाको गहुँपकेट कार्यक्रमअन्तर्गत बरियाली कृषक समूहले खेती गरेका हुन् । समूहमा २५ जना किसान संलग्न छन् ।
त्यहाँ विजय जातको गहुँ लगाएका छन् । खेतीका लागि महानगरको कृषि शाखाले गुणस्तरयुक्त सो जातको बीउबिजन प्रदान गरेको थियो । यसका अलावा कृषकलाई विभिन्न कृषि औजार र व्यवस्थापनमा महानगरले सहयोग गरेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुली, कृषि विज्ञ र कर्मचारीसहितको टोलीले गहुँको पकेट क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्दै कृषकका आवश्यकता र स्रोत साधनको व्यवस्थापनसमेतका विषयमा जानकारी लिए ।
सोही अवसरमा कृषकहरुद्वारा आयोजित छलफलमा समेत प्रमुख पराजुली सहभागी भएका थिए । कृषकले गहुँ र धान काट्ने आधुनिक कृषि औजार रिपर उपलब्ध गराइदिन माग गरेबमोजिम महानगरले रू. १० लाख दिने भएको छ । यसमा कृषकले समेत रू. १० लाख थप गरी रू. २० लाखको लागतमा कृषि औजार खरीद गर्ने भएका छन् ।
विराटनगर–१८ र १९ मा कृषि गर्न योग्य क्षेत्र रहेका छन् । महानगरले यी दुवै क्षेत्रमा कृषिका कार्यक्रमहरु केन्द्रित गरेको छ भने कृषकका लागि विभिन्न सेवा दिँदै आएको छ । विराटनगर क्षेत्रमा खाली भूभागमा धान खेती, तरकारी खेती, मकैबाली, गहुँबाली जस्ता बाली लगाउने गरिएको छ भने केही किसानले आँपका बगैँचा पनि लगाएका छन् ।
महानगरपालिकाका प्रमुख पराजुलीले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सक्दो सहयोग गर्ने बताए । रासस
बीपी कोइराला सेवा केन्द्रमा प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क[२०७७ माघ, २]
कोशी कोरिडोरमा थप सात पुलको निर्माण सम्पन्न हुँदै[२०७७ पौष, २९]
विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्दा विस्थापित हुनेहरूको संघर्ष समिति गठन[२०७७ पौष, २८]
महुरे–फोक्सिङटार सडक कालोपत्र कार्य अलपत्र[२०७७ पौष, २७]